Funda i-AutoCAD Civil 3D, Izixhobo eziXabisekileyo- iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Funda i-AutoCAD ye-Civil 3D, izibonelelo ezixabisekileyo
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISGeospatial - GISZobunjineliTopography
Funda i-AutoCAD ye-Civil 3D, izibonelelo ezixabisekileyo
Ukuba lilungu le-AUGI MexCCA inezibonelelo ezininzi, enye yazo kukufikelela kwizixhobo okanye izifundo zokufunda. Kule meko ndibonisa isishwankathelo sezona zifundo zisemgangathweni ekusetyenzisweni kwe-Civil 3D yeendlela, ubume bendawo kunye nejogosifisi. Ezinye ziividiyo, ezinye ziifayile zepdf. Kuyimfuneko ukuba ubhalise ukuze ukwazi ukubabona, ke kuya kufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye inombolo yokuvula, okanye ubhalise okokuqala.
AutoCAD Civil 3D yeeNdlela
Ukuyila iRipublic Returns kwi-3D yabasebenzi Ukuhlanganiswa kwee-corridors ukuchaza iNdlela yeNdlela kwi-Civil 3D.
Ukuyila iRascan League kwi-Civil 3D Ukuqulunqwa kwamaqela ebakala kwi-Civil 3D esebenzisa izixhobo ezimbini: Iimpawu zeMpawu kunye neProfayili ekhawulezayo.
Yakha i-text Referenced for Intersection Design Ukuyila i-intersection of roads, kufuneka sikwazi ukuphakanyiswa kwamaprofayili apho kuthethana khona. Iibhile zetekisi ezichongiweyo (ezifumaneka kwi-2008 version) zisinika indlela esheshayo yokufumana le ngcaciso.
Qulunqa isixhobo sePalet kwi-Civil 3D Siza kufezekisa ukuQongwa kunye nokwenza ngokwezixhobo zePaletsti zendlela yokuyila indlela.
Yakha Uhambo oluKhenketho lweNdlela kwi-3D yaseburhulumenteni Kule ndlela siza kuqhuba uhambo oluthile lweendlela ngaphakathi kwe-Civil 3D.
Bala iiVolumu usebenzisa i-Subassembly kwi-Civil 3D Ukuphuhliswa kweeprojekthi zendlela, ngokukodwa ukucwangciswa kwendlela, ngokuqhelekileyo kudinga ukubalwa kwevolumu yomqulu, ngokusekelwe kwimimandla yeziphambano.
Indlela yokusebenzisa i-Autodesk Civil Design Companion Sheet Manager Autodesk Civil Design Companion, lizisa sisixhobo usinika ithuba ukudala ifomati yoshicilelo esezantsi ebandakanya kwisityalo, iiprofayili kunye namacandelo umnqamlezo ngaloo okuvelisa isethi yonke lwezicwangciso ezifunekayo ukuze kwiprojekthi wendlela ngendlela ezenzekelayo kwaye kwimigangatho efunekayo.
Bhala uphawu lokulungelelanisa ne-AutoCAD Civil3D Mileage flag Ngokuqhelekileyo sifuna ukubhala ukulungelelanisa okuhambayo kwiprojekthi yendlela kunye neflegi ebonisa i-mileage ye-axis.
Ukusetyenziswa kwe-AutoCAD yoluntu kwiCrographic
Izixhobo zokucoca kwiPARTCAD MAP Ukusetyenziswa kwezixhobo zeMephu ye-AutoCAD, ukuba ube nemveliso kwimisebenzi yokudweba.
Chaza iiNkqubo zoLungiselelo kwi-AUTOCAD Civil 3D 2008 Esi sihloko uza kuxoxa ukuze kufakwe indlela inkqubo nokulungelelanisa kubume bethu AutoCAD Civil okanye AutoCAD Imephu 3D 2008 3 2008D kwaye ikakhulu nokulungelelanisa inkqubo lambert (INEGI Mexico)
Lisp ukudala i-Topography Point Building ye-AutoCAD Udala Umdwebo woKwakha woPhando lweeNqaku kwi-AutoCAD 2000 kwaye kamva.
I-AutoCAD yoluntu ngokulawulwa kwendawo
Hlaziya iinqununu kwi-AutoCAD 3D Indalo engaphezulu ngokusebenzisa umbuzo usebenzisa iphepha lokusebenzela imephu ukukhetha kwifayili ulwazi lwezinto ukuvelisa umgangatho kwaye wenze uhlalutyo lokuphakama.
I-Extrapolation Surfaces kwi-Civil 3D Ukugqithiswa kweendawo xa singenayo idatha ezweni lethu yimeko enomdla ekufumaneni idatha eyongezelelweyo ngaphaya kobugcisa bethu, lo mzekelo usibonisa inkqubo yokwandisa indawo kwi-AutoCAD Civil 3D.
Sebenzisa idatha yeRaster ukwenza "iDrap" kumphezulu wobuso Le vidiyo ibonisa indlela yokwenza lo mbandela ngendlela enokuthi umfanekiso ufumana umxholo wokukhulula komhlaba.
Amanqaku angenisa ngaphakathi kwi-Civil 3D Kule ndlela siza kufaka iFayili yePalati kwaye siya kudala umhlaba
Phatha i-Surfaces kunye ne-Centroid Report kwi-Civil 3D Kwiimeko ezininzi kubalulekile ukufumana i-centroid ye-3D emele ubuso okanye umthamo womhlaba wokubala ukuhamba kweendlela zokuhamba emhlabathini
Yenza i-Break Lines ukuze uchaze i-Surfaces kwi-Civil 3D Inxalenye ebalulekileyo yeprojekthi yeziseko kukuba ibe nezobugcisa obunokwethenjelwa, obuqinisekisa ukugqitywa kweprojekthi elungileyo kunye nokwenziwa komsebenzi okwanelisayo.
Yenza amaleyibhile ebanga leProfayile kunye namacandelo ahamba Ukudala kweebhaliweyo njengemfuno eqhelekileyo yokunikezelwa kweeprojekthi zendlela, le ilebula ibonisa isilinganisi esicacileyo kunye nesigxina esiya kubonakala kokubili kwiiprofayile nakwii-cross section.
Ukusetyenziswa kwe-AutoCAD Civil 3D kwezinye izibonelelo
Yakha ii-Tunnels Portals kwi-Civil 3D Kuqheleke kakhulu xa usebenza kwimisebenzi yomhlaba ongaphantsi komhlaba, kufuneka ufeze imisebenzi kwimisebenzi yeemisebenzi eqhuba imisebenzi yokunciphisa umthamo ukuze ukwazi ukunika ifom kunye nokuhambisa amanzi kwiifayile.
I-AutoCAD Civil 3D Iziqendu zeSeshane Kukho izinto ezininzi ezisetyenziselwa izigaba eziphambeneyo (iiNdibano). Ikhathalogu yokufanisa iikorrid iquka izixhobo zokugcina izindonga, izitimela, amabhuloho, iziteshi, imigodi, imigodi kunye nezinye izinto.
Izifundo ngokusetyenziswa ngokubanzi kwe-Civil 3D
ISicwangciso soPhuhliso ... imibhalo kwi-AutoCAD Civil 3D Le vidiyo ibonisa izixhobo zokuvelisa ukwenza i-automate inkqubo yokubhala iiplani zakho.
I-3D DWF kwi-PowerPoint Le vidiyo iza kusinika umbono malunga neeNkcazo eziLawulayo usebenzisa i-Autodesk Design View kwi-PowerPoint.
I-AutoCAD yomsebenzisi womsebenzisi 3D 2008 Kule ndlela siza kuthetha nge-AutoCAD yomsebenzisi womsebenzisi 3D 2008
I-Formule YesiGaba se-AutoCAD Ukuphuhliswa kokudala izikali ngaphakathi kwe-AutoCAD.
Ukufudukela kweDatha kwi-Civil 3D Ngamanye amaxesha sithola ulwazi oluvela kwezinye izinto ezifana ne-DWG, i-DXF, i-LandXML okanye i-GIS ifayile, njengemibutho yokudweba eneenkcukacha, izithako, ukulungelelaniswa kunye neeprofayili ezingenxalenye yenkcazelo.
UkuLawula iiprojekthi ezinkulu kunye nokufikelela ngqo Nangona i-Civil 3D iyisisitye esipheleleyo kwaye isinika inzuzo enkulu yokuyila iiprojekthi zeziseko zophuhliso, kuyinyaniso ukuba inkqubo ifuna ezininzi izibonelelo ze-hardware kwaye ukuba xa kulawulwa iiprojekthi ezinkulu, ukusebenza kweekhompyutheni kuncipha kakhulu. Enye indlela yokusebenza kunye nenani elikhulu lwedatha ngokusebenzisa "iifutshane" (ezimfutshane). Lawula iiProjekthi ezinkulu ngeendlela ezimfutshane - Icandelo II
Yakha ithegi ekhethekileyo Ukusetyenziswa kwamazwi kwi-AutoCAD Civil 3D 2008 ukuchaza amathegi akhethekileyo
Xhuma iMaphu ye-AutoCAD kunye neenkcukacha zangaphandle
Qhagamshela i-AutoCAD MAP kunye ne-Oracle Le vidiyo ibonisa indlela yokuxhuma kwi-Oracle esuka kwi-Autodesk Imephu, ukufikelela kwiimpawu ze-Oracle, ukuhlukanisa izinto kunye neempawu zefayile ye-Autodesk Map kwaye ubathumele kwi-Oracle.
Ukuqhagamshela i-MS-Access Database kwiMephu 3D Ukuqhagamshela i-Microsoft Access Database kwiMephu 3D 2007 / 2008
Qhagamshelana nedatha kwi-MS-Access Database kwiMephu 3D Chaining Data kwi-Microsoft Access Database kwiMephu 3D 2007 / 2008
Isiqhagamshelo kwiiNgcaciso kwiPARTCAD MAP Ukuhlanganiswa kwiinkcukacha usebenzisa iMaphu ye-AutoCAD
Okwexeshana i-AUGIMX ibisoloko ilungisa iphepha layo kwaye ezi linki azifumaneki, siyathemba ukuba siza kuba nazo kwakhona ezi zibonelelo kwaye siqiniseke ngakumbi.
I-AutoCAD Imephu AutoDesk 3D civil Dwg
Kukho umlingo kwi-monitor yakho
Ungangena njani ulungelelaniso kwiGoogle Earth / maps
Iiveki ze3 ezedlulileyo
I-Civil ikuthumela i-imeyile kwidilesi yakho ye-imeyile kodwa ndiyifumana,
-Ukuqulunqwa kwedama ngamathambeka ahlukeneyo kunye namanzi azo.
- ubalo umthamo
yinto endiyifunayo ukuba ndifunde indlela yokwenza ngayo
UJulian Cruz Ramos uthi:
Umxholo omhle kwaye kulula ukufunda.
Molo, ingaba umntu ungandinceda ngeetemplate zeprofayili yezityalo kunye namacandelo eminqamlezo xfa ... ukuba uneetemplate andazi ukuba ungazithumela kum majecohua16@hotmail.com kwaye sibonga kwangaphambili
Uthetha ntoni ngococeko?
nceda ukuba umntu angandinika uncedo kunye ne-3d yomphakathi Ndifuna ukufunda ukwenza ucoceko ndiyifumana into enokukunceda ukuba ungithumelele i-imeyile aquitevez_19@hotmail.com imuchas Gracias
Ender Bustamante uthi:
Mva ntambama, kufuneka uhlalisane nokuqhubela phambili kwezobuchwepheshe. Siyabonga ngeminikelo yakho.
I-AugiMEXCCA ilungisa okwesikhashana iphepha layo, ngoko ke izinto ezininzi azifumaneki.
Siyathemba ukuba ngokukhawuleza ubone iphepha lakho elitsha livuselelwe.
FRANCO RUIZ uthi:
Umtsalane, iividiyo zakho zezona zilungileyo kwaye zinceda kakhulu, zigcine, mhlobo… kakhulu kodwa enkosi kakhulu
Juan Carlos uthi:
Ngomhle nje. Ndiyifumana into ecacileyo, elula, kunye nekhonkrithi.
Molo, ngaba umntu othile angandinceda ukumisela ulungelelwaniso lwemibhobho kwaye anike ukugoba kwendalo kwaye angadluli kolo luhlu ...
Ndineengxaki zokungenisa iinqanaba eziphambene nezifundo zamanzi ezidalwe kwi-3d yaseburhulumenteni kwi-hec ras. xa ndithengisa inani lamanqanaba okwanda kwinqanaba lomngcipheko wamanzi isizathu sokuba umzekelo unika iziphumo ezingalunganga. Ngaba umntu uyazi ukuba angenise ngokufanelekileyo? Okwangoku ndingayitshintsha xa idatha ingeniswe kwifayile?
WILMER GEORGE uthi:
Iividiyo ezilungileyo kakhulu, ezibonisa imifanekiso
myra zavala uthi:
nceda, ndifumana umdla oluninzi, ndifuna ukwazi ukuba kukho ubudlelwane phakathi kolwimi lwenkqubo apho le mephu efakwe khona ukufikelela kwi-database ye-Oracle, kuba xa ndidibanise kwi-bd NgeSpanish ndibonisa ulwazi lwetafile ngaphandle kwengxaki kwaye xa kunjalo ukuba nesiNgesi ngoko ulwazi olukwithebhile alubonakalwanga, luphela luxelela inani elipheleleyo leirekhodi eziqulethweyo.
Ngaba kukho nayiphi na impawu endiyifunayo ukuze ndikwazi ukubonisa idatha kunye nesiNgesi?
Ndiyabulela kakhulu kwaye ndivuyisela indawo yakho, imfundo kakhulu
Ndinevidiyo zokufundisa ze-autocad civil 3d 2010, nantsi iziqulatho
I-AUTOCAD CIVIL 3D 2010
-Ukubonakaliswa kweeyunithi kunye nokulungelelanisa inkqubo.
Iimpawu zokubaluleka ngokwefomathi: IPENZD, NEZ, DNE.
-Ukwenziwa kweefomathi zamanqaku angeniso.
- Ukubhalwa kwamaphupha.
Ukuveliswa kweqela lamaphuzu: ngokuphakama, ngokwempawu.
-Ukuxhamla uxhumo lwamanqaku achazwe ngepolline.
- Ukunikwa kwedatha yenkcazelo (ububanzi, Inkcazelo, North, East.etc).
-Kongeza okanye ususe amanqaku ngesandla.
-Ukukhutshwa kwamanqaku eenkcukacha zokuthumela ngaphandle.
-Ukuveliswa komphezulu ukusuka kwifayile yeengongoma.
-Indlelapolitiki yendawo eyenziwe yifayile yephoyinti.
-Ukuveliswa komhlaba ukusuka kwi-TIM
Ukuveliswa kweendawo ezivela kwiipollines (iinqanaba zamanqanaba e-autocad)
-Ukuhlaziywa kweendawo ngokusetyenziswa kwepollinea (imida).
-Ukuhlelwa kwemigca yesigxina (iziqendu, iintshukumo ezincinane kunye nezindonga ezinkulu)
Ukuveliswa kwemilinganiselo eveziweyo kunye nokuhlela
-Indlela yokujika imifanekiso yendalo (ukudala isitayela)
-Analysis of surface ngokuphakamileyo okanye ubukhulu (Achurado ngokobubanzi boluhlu), ukudalwa kwetafile kunye nokushicilela.
-Analysis of surfaces nge-directional slope, ezinye ihlalutyi kunye neetafile zazo eziphathekayo.
-Recurrido eya kwenza utywala lwamanzi phezu komhlaba (okulungele ukuhamba kwemifula nemifula)
Ukuveliswa kokulungelelaniswa nge-polyline
-Shintsha utshintsho lwexesha elifutshane
-Isicelo sendlela yokulungelelanisa, ukulungelelanisa izalathisi.
-Ulungelelaniso lwamabhalana olungelelaniso.
-Ukufakela ukuvalela ukubonisa: Km
Ukuveliswa nokupheliswa kwe-PI, iirveve.
-Ukuhlelwa kwezinto zokujika kunye nokukopisha kwi-Excel.
-Impawu yokulungelelaniswa ngokuklanywa koyilo (imigca echanekileyo, iindophi kunye nemimoya)
Ukuveliswa kweengxelo zedatha yokulungelelanisa.
Ukuveliswa kwenkcazo yexesha elide kunye nokwehla kwicala ngalinye.
Ukuveliswa kwemigangatho (umthamo, izinga leendawo, izinga lokuphakama, ukuqhubela phambili, ukulungelelaniswa, ubunjani beendawo eziphakamileyo zeendawo kunye nebakala)
-Style kunye neelayibhile yokupakisha (PI, PC, PT, K, Lc, intengo yokuhlaziywa, etc)
-Ukuhlelwa kwiprofayili (uluhlu, iigridi, izikali)
-Ukupheliswa kunye nokudalwa kwe-PIV, faka ii-curves curves.
-Ukubonakaliswa kokufakela iisetyenzisi zezixhobo kwietrikhi.
Ukuveliswa kwamacandelwana eminqamlezo ngokusebenzisa isistim:
Hamba ngeendlela zokuhamba, indlela ngaphandle kweendlela zokuhamba, umzila we-trapezoidal, isiteshi somxholongwane
Ukuveliswa komzila kunye nomgangatho wekridi.
Ukuqulunqwa komthamo we-corridor surface
-Ukuthatha iilebula zamacandelo ahlukeneyo:
Ubungakanani bomhlaba, inqanaba lomthamo, itafile yeendawo zokunquma nokuzalisa.
-Ukuhlelwa nokunikezelwa kwamacandelwana.
-Umboniso weendawo, imiqulu.
-Ingxelo yetafile yeendawo kunye nemiqulu kwi-Excel.
. Ukufakwa kwesibonakaliso kunye neefestile kunye nezikali ezifanelekileyo zokubonisa izicwangciso
. Ukunikezelwa kwenkcazo ngeekhilomitha
. Ukufaka amalebula kwiphrofayili ngeekhilomitha (Izitrato, idatha yeengcingo eziqhelekileyo, njl)
Ukwenza ngokwezifiso izicwangciso zesiteji kunye neprofayile ngamakhilomitha.
-Ukuveliswa kwamacandelwana e-crossline kwii-polylines
Ukuveliswa kokuhlaziywa kwemigca
-Ingxelo yeendawo zeGoogle zomhlaba kunye nakwezinye izinto.
I-9.-Sebenza ngeeprojekthi ezinkulu: Iidrusho zeDatha
I-11.- Ukuthengiswa komphakathi kwi-hec-ras
Ukuba uthanda, ungandibhalela:
nceda nceda undize ndidale iziboniso zendlela kwi-3d yaseburhulumenteni, ungeko njengoko kwenziwa ngelizwe ngokubulela kakhulu kodwa kungcono xa undithumela kwi-imeyile yam percy_o_@hotmail.com imuchas Gracias
Ndiyonwabile kakhulu ngolwazi olunikeziwe, kuba kunzima ukusombulula ukungabikho kwamathandabuzo athile ngexesha loyilo, ngoko ndikuvuyisela ngezo zikhokelo ezilungileyo kwaye iphepha liyilwe kakuhle, ndiyathemba ukukunceda nakweyiphi na isifundo esilungiselela baya kuba nayo.
Ukubulisa kuwo onke amaQonga.
Ndingumakhi kodwa andinamava kule nkqubo ndicinga ukuba iminikelo yakho ibaluleke gqitha
INDLELA NGOKUBHALISA NGAYO INKQUBO YOKUSETSHENZISWA KWENKCUKACHA YOKWENZA NGOKUQHUBA IINGXELO ZAMANINYE; KANYE NOKUBA NGENZA NJANI INKQUBO NGENKQUBO YOKWENZEKA KWE-TENGAM EZIQHELEKILEYO KWEZIKHONO ZETHU.
Ndiyabonga ngokuba negalelo la mavidiyo aza kundinceda kwikhosi endiyithathayo kwaye baya kundikhonza ukuba ndizenze.
Ndiyabulela kakhulu ngenxa yegalelo, ayenjalo kakhulu. Kumele ukuba umdla umdla we-48 zombini iividiyo.
Disemba, 2009 kwi
Kule linki ingezantsi uku-odola into elungileyo, akukho 48 ama originals umgangatho AutoCAD CIVIL 3D 2010 Educational ngeSpanish, nokusombulula umgangatho ophezulu, kwakhona ukunika iifayile ezisetyenziswa iividiyo ezisebenza njenge template ukusebenza ngokukhawuleza yam iiprojekthi, Ndithenge yaye yayilingana, ikhondo obalaseleyo CIVIL 3D 2010 ukuba bafunde ekhaya ungayihlawuleli zifundo iklasi, okanye sikhohliswe mercadochoros Umxholo embi, MercadoLibre, rematazo, DeRemate,-eBay. njl
Nantsi imemo yevidiyo zangaphambili, nangona inxalenye yesikrini ibonakala, iividiyo zigcwele isikrini.
I-48 VIDEOS I-AUTOCAD CIVIL 3D 2010 UKUFUNDA EKHAYA
Ndiyayixabisa ukuvuyisana, kodwa kufuneka ndivume ukuba esi sithuba sisishwankathelo somxholo ose-AUGI MexCCA, apho umxholo ugcinwa kwaye ufanelekile kubasebenzisi abaninzi be-AutoCAD abaye babambisana ngokuthumela iindlela zabo ezilungileyo. Bachitha iiyure ezininzi besenza loo mi sebenzi, ndachitha imizuzu ye-40 ukukhetha kunye nesithuba.
Oscar Vásquez uthi:
Iphiko elihle, inomdla njani oku ukuba oko kuhle ……
Eli phepha Iphelele kakhulu ..
Ndiyabulela kakhulu ngenxa yenkxaso, yindawo endiyifumeneyo, ndivuyiswe kwiwebhu
BONISA INDLELA EQHELEKILEYO YOKUBONA
Kuya kukunceda usebenze ApliCAD iiprojekthi, eziqhelanisiweyo ukugqiba imisebenzi
AMAHLE KAKHULU iividiyo, Ndithenga ikhosi AutoCAD CIVIL 3D bangaze USEBENZE AS WAYESAZI kokungenanto malunga nale INKQUBO NAMHLANJE KUNYE mncinane ME ukuva ukuba UNAYO NA ividiyo INDLELA UKUQALA uphuhliso PROJECT kuphela E bafunda izinto NAYE.
Khangela, asiyiyonxalenye ye-AUGI, sikhuthaza kuphela izixhobo zakho. IAUGI idinga ukuba ubhaliswe ukuze ukwazi ukubona umxholo, akukho nenye indlela yokuqhubeka uzama.
ukugqithisa ngo-Agasti uthi:
Okokuqala kukubonga kakhulu ngale mivuzo, ndiyavuyisana nawe, ndikunika i-10
Ndingabhalisa njani? kuba benza ukubhaliswa okunzima kangaka kwaye ndahamba ngephutha
I ixesha ukhangela ividiyo tutorials, kwaye inzima kakhulu, kodwa ndafumana le website kwaye nzima phantsi tutorials bacebisa yona, ngoku ndiza kuzama ukuba sibone ukuba ihamba njani, ke baxelele ukuba yayilingana
Andres Sandoval O. uthi:
Othandekayo, amaqela encoko ngeSpanish ayilungile. Ndivela eChile kwaye ndisebenzisa i-C3D kwinguqu ye-2006 kwaye inyaniso kukuba iphucule kakhulu kwaye isisona esihle kakhulu sokubala kunye nokuyila kwemisebenzi ehambelana nokunyakaza komhlaba. Zama ikhonkco http://forums.augi.com/index.php Ndizuze okuninzi kuyo. Ndidibene naye kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ulungile kuba kwimeko enzulu kakhulu banokubeka izimvo kwiingxaki zabo ngenkqubo kwaye baninzi abantu kule forum abanegalelo kumava abo axabisekileyo yonke imihla. Inkqubo inamanqaku ayo abuthathaka kodwa andikwazi ukunceda kodwa ngoyaba amandla ayo amakhulu. Ngethamsanqa endleleni….
Kufuneka ubhalise ku-AUGI
Roandl Espinoza uthi:
Ndingayilanda njani le vidiyo,
michel raul uthi:
lo mbandela. Ulungile kakhulu kwaye ufundela ngokubanzi kwaye ngoko-ke abaqeqeshi bangafezekiswa ngolu hlobo
u omar uthi:
lakho negalelo lilungile Ivan Ndicinga ukuba ndiza kufunda kakhulu kule ncwadana ebalulekileyo ye-AutoCAD Civil 3D ngokubonga ngegalelo lakho.
Andazi ukuba ungathumela na nge- “AutoCAD Civil 3D Channel Sections” uvule. okanye ungathumela i-imeyile yam fashion.g_omar@hotmail.com
Ndifuna ukufunda ukuyila i-tunnel, incwadana. Ndiyabulela kakhulu
Kwi-DF kukho amaziko oqeqesho ahlukeneyo agunyazisiweyo yi-AutoDesk, phakathi kwabo:
Aula Virtual SA de CV
Dibujo Arquitectonico por Computadora SA de CV
ICIC, iSithili seSithili
I-Joflan Systems SA yeCV
Le nxu lumene ne-ATC eyahlukeneyo eMexico, ngeenombolo zabo zefoni:
Sawubona, iphepha elihle le-3D yomphakathi, Ndingathanda ukwazi ukuba banikela izifundo kwi-DF okanye into efana nale nkqubo, siyabonga kakhulu. Nibuliso!
Akukho mbono uRoger. Uxolo
hello good..good page.:)..Ndingathanda ukwazi ukuba ndingazifumana phi iipaseji zokongezwa kwe-civil 3d 2009 esebenza ..? Kuba kwiwebhu ndinazo kodwa andikwazi ukuzifaka, indixelela impazamo ..: S ... ndiyathemba ngoncedo lwakho olukhawulezileyo .. enkosi
MEXCCA e AUGI sisikhokelo msinya 3D civil Ndifunda phantsi kwaye kuhle kakhulu, ukuba ngabakhokeli ezimbini isiSpanish kodwa njengoko ilenga uya kuthumela ku Maestro Alvarez ngenxa yokwanda
UJan Carlos Pineda Escoto
Pedro Manuel Guaya Pauta uthi:
Kulungile I ukuphehla iitekisi yakhiwe, kodwa inonvenientes ngokuba, ukuhlelwa profiles apho ukufumana olusisikhokelo izimvo, ndiyabulela kuwe yonke
UKUVUMA KWEZIMALI KUBULEKILE
JIMY LLANOS ESPINOZA uthi:
NDANCEDA UKUNIKELA IZINDAWO NEENKONZO KWI-CIVIL 3D, UKUNIKELA NGAKHULU
david channels uthi:
Isixhobo esihle kakhulu sobunjineli bendlela, Ndingathanda ukufunda indlela yokuqhuba amacandelo, ukuba unokunceda. Ndiyabonga kakhulu
Uqeqesho oluhle kakhulu lwe-3d yoluntu olugqibeleleyo lugqibeleleyo olufunyenweyo lokufunda i-3d yoluntu
Kumelwe wenze isitayela sombhalo, wenze uqobo ngobukhulu kwaye ubenike kwiipropati zeprojekthi.
Enkosi ulwazi lwakho, inyaniso ethile inkqubela, mna olurhwetywe amanqaku kuni, unokuvelisa umphezulu, andikwazi bazibize undibonise iitekisi elikhulu kunene, akwazi ukunceda.
OKUYA KUCHINTSHA AMAKHANDO ENKCUBA.
LE MSEBENZI YIKHULU.
Angel Roberto uthi:
Ndifumana onke amanqaku anomdla.
Ndingathanda ukubhalisa ukungena ngaphandle kwengxaki.
Ndiyathemba ukuba uyayivumela.
INDLELA YOKUBHALISA AMANQAKU ASEBENZINI KWI-ALIGNMENT YONYAKA,
NOKUBA NGOKUBA KUNYE UKUBHALA KUNYE NOKUZIPHATHA INDAWO KWIINKCUKACHA ZEZICWANGCISO
Umhlobo ogqwesileyo kunomvuzo gqitha ukuhlangabezana nabantu abanjengawe,
Eyona nto sibona ukuba kukho utshintsho olubalulekileyo kunye neenguqulelo ezintsha ze-CIVIL 3D, nangona kunjalo, ndicinga ukuba kulandela ukulandelelana kwaye kufaka utshintsho olutsha. Ndiyabonga kakhulu ngolwazi.
Ikhasi lokuqala elinemithombo eninzi kunye
mbulela ngegalelo lakho
Ndingumqali, kwaye ndifumanisa ukuba le ndawo inkulu,
mbulela ngegalelo lakho.
Ewe kubonakala ngathi ikhonkco lophukile ... ndiza kujonga
jose armando uthi:
kuhle, ndiyabonga kakhulu ngezinto eziphathekayo, kodwa ifayile "ye-AutoCAD Civil 3D yeSiteshi" ayivuli, ndingathanda ukuba uyikhuphe kwakhona, enkosi.
Sawubona, ndifuna ukuba undixelele indlela endiyenza ngayo ukunika umoya ophezulu kumhlaba.
Ndicinga ukuba ukuqala ngala mavidiyo kuyindawo efanelekileyo yokuqala, ngoko-AUGI MexCCA inomthombo ongaphezulu kunokuba ufundiswe kule post.
Ndisebenzisa kakhulu i-3d yoluntu, ndifuna ukufunda okuninzi, wena unamava amaninzi, nceda undiphe umyalelo wokufumana ulwazi, yinkqubo enomdla kakhulu
ukuyeka amilcar elias medina uthi:
Eli khonkco linomdla, kuba ndisebenza kakhulu kwi-GIS kwaye ndinomdla omkhulu wokufunda i-Civil 3D, kuba nam ndisebenza njengomcebisi ozimeleyo kwaye kulula ukuphatha iCAD kune-GIS… .kodwa enkosi….
Kuyathakazelisa izimvo zakhe kunye noko akutyhilelayo nge-autocad
Idatha enhle kakhulu kulabo baqala nje, ndiyathemba ukuba neminikelo yenu eninzi, mbulela yonke into
Mna Ivan, kwiphepha le-AutoDesk unokwazi ukuba yeyiphi iinkampani ezithengisa ezi mveliso kunye neenkonzo.
apha ndikuthumela unxibelelwano lwe-DF
IVAN GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ uthi:
ukunika cursoso into ethile ngohlobo lwe-autocad civil 3d kwisixeko saseMexico df kwaye ukuba banike njengoko ndidibana needyuli
Kufuneka u tyelele iAUGI MexCCA, kukho izixhobo ezininzi
Lo ngumnikelo wokuqala opheleleyo kangangokuba ndifumana ngesiSpanish.
Yintoni endiyenzayo ngoku?
Ikhosi kaGoogle Earth: ukusuka kwisiseko ukuya phambili
Google Earth sisoftware eza kuguqula indlela esibona ngayo umhlaba. Amava okujikeleza ...